Video Ara-baiboly Amin’ny Fiteny An-jatony
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Basque Batak (Toba) Bichlamar Chichewa Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Galicienne Galoà Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Népali Oromo Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal
Ny fandikan-teny no anisan’ny amantaran’ny olona ny Vavolombelon’i Jehovah. Efa voadikanay tamin’ny fiteny 125 ny Baiboly, tamin’ny Novambra 2014, ary tamin’ny fiteny 742 ny boky sy gazetinay. Mandika video koa izahay. Tamin’ny Janoary 2015, ohatra, dia efa nisy tamin’ny fiteny 398 ilay video hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana?, ary tamin’ny fiteny 569 ilay hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? Ahoana no ahavitanay an’ireo asa be ireo, ary nahoana izahay no manao an’izany?
Nampirisihin’ny Filan-kevi-pitantanana ny biraon’ny sampana rehetra eran-tany, tamin’ny Martsa 2014, mba handray feo an’ireo video amin’ny fiteny betsaka araka izay azo atao. Ny hampandrosoana ny asa fampianarana Baiboly no tanjona amin’izany.
Dingana maromaro no mila arahina rehefa handika video. Adikan’ireo ekipa mpandika teny aloha ny lahatsoratra amin’ilay video. Fidina avy eo izay hanao ny anjara tsirairay amin’ilay izy, ka olona mahay tsara an’ilay fiteny nandikana azy no raisina feo. Ny ekipan’ny feo sy video indray no mandray feo sy manadio an’ilay izy. Apetraka amin’ny toerany koa ny soratra miaraka amin’ilay video, raha ilaina izany. Atambatra amin’izay ny feo sy ny soratra ary ny sary, dia alefa ao amin’ny tranonkalanay any amin’ny Internet mba ho azon’ny olona alaina.
Misy toerana fandraisam-peo any amin’ny biraon’ny sampana sasany, sady misy olona efa nampiofanina handray feo. Ahoana anefa ny amin’ireo fiteny ampiasaina sy adika any amin’ny toerana mitokana kely?
Misy teknisianina mpandray feo sy fitaovana fandraisam-peo azo entina mandehandeha, any amin’ny fandraisam-peo rehetra eran-tany. Manamboatra toerana fandraisam-peo vonjimaika any amin’ny birao na Efitrano Fanjakana na tranon’olona izy ireo, ary manana mikrô sy ordinatera misy programa fandraisam-peo. Olona mampiasa an’ilay fiteny nandikana an’ilay video no asaina mamaky, manoro hevitra, ary manamarina an’ilay izy. Rehefa vita ilay zavatra noraisim-peo ary nekena hoe mety tsara, dia mifindra any an-toeran-kafa indray ilay teknisianina ary entiny miaraka aminy ny fitaovana.
Lasa misy amin’ny fiteny avo telo heny noho ny teo aloha ny video-nay noho io fomba fiasa io.
Tena tian’ny olona ireny video ireny. Ho an’ny olona maro aza, dia ireny video-nay ireny no video voalohany hitany tamin’ny fiteniny.
Misy amin’ny fiteny pitjantjatjara, ohatra, ny video-nay. Anisan’ny fiteny ampiasaina any Aostralia izy io, ary olona 2 500 mahery no mba mampiasa azy. Tany Alice Springs, any amin’ny Faritany Avaratra, no natao ny fandraisam-peo. Hoy i Callan Thomas, izay nanampy tamin’ilay fandraisam-peo: “Tena tian’ny olona be ireo video. Satrin-dry zareo foana hijery an’ilay izy, sady manontany foana ry zareo hoe aiza no ahitany video hafa. Tsy dia misy amin’io fiteny io ny boky sy gazety. Tena gaga àry ry zareo rehefa maheno an’io fiteny io, ary indrindra moa raha afaka mijery video amin’ilay fiteny.”
Nandeha lakana nanaraka renirano, indray mandeha, ny Vavolombelona roa any Cameroun. Nijanona tao amin’ny tanàna kely iray izay ry zareo. Pygmée no mponina tao ary mpampianatra tany an-tsekoly ny lehiben’ilay tanàna. Niresaka tamin’ilay rangahy ireo Vavolombelona ka fantany fa miteny bassa izy io. Nasehon’izy ireo azy tamin’ny tablette ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? Gaga be ilay rangahy nahita azy io tamin’ny fiteniny, ka nangataka boky sy gazety.
Tena tsy tia Vavolombelon’i Jehovah ny mpitondra fivavahana any amin’ny tanàna iray any Indonezia. Nodorany daholo ireo boky sy gazety nozaraina tany amin’io faritra io. Nisy olon-kafa koa nandrahona ny handoro ny Efitrano Fanjakana. Tonga tany an-tranon’ny Vavolombelona iray ny polisy efatra, tatỳ aoriana, ka namotopototra an’izy mianakavy kely. Tian’izy ireo ho fantatra hoe inona no atao any amin’ny Efitrano Fanjakana. Nalefan’ilay fianakaviana àry ilay video tamin’ny teny indonezianina hoe Inona no Atao any Amin’ny Efitrano Fanjakana?
Hoy ny iray tamin’ireo polisy rehefa avy nijery an’ilay video: “Azoko amin’izay izao hoe mitsaratsara anareo fotsiny ny olona, fa tsy tena mahafantatra anareo akory.” Nisy tamin’ireo polisy nangataka an’ilay video mba hasehony amin’ny olon-kafa, amin’izay, hono, ny olona mahafantatra tsara ny Vavolombelon’i Jehovah. Lasa tia Vavolombelon’i Jehovah izao ny polisy any, sady miaro azy ireo.
Jereo amin’ny fiteninao koa àry ireny video ireny raha mbola tsy nahita ianao!